Hino Dutro 2008 (#637348) ကို Kamaryut မြို့နယ်တွင်ရောင်း... | CarsDB
1872 total views, 10 today
Lot Number: #637348
Hino Dutro (Truck)
ရောင်းဈေး	-	315	သိန်း
XZU304M-1007284 , 2008Model, 4000CC, 10 Feet,
3 Tons , 193256KM
Car No.	-	Sati/…. Company License (BGO)
***ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သုံးရန် ကားသန့်ပြီး Weight များများ
တင်နိုင်သည့် ရှေ့လေး နောက်လေးကားမျိုးရှာနေသူများအတွက်***
မူဝါဒအသစ်အရ ယခုနှစ် 2019 ခုနှစ်မှစ၍ (2015Model မှ 2019Model)ထိ ဘယ်မောင်းကားများသာတင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။ Japan ညာမောင်းကားများ ထပ်၍ တင်သွင်းလို့မရတော့ပါ။ မော်ဒယ်မြင့်သာ တင်သွင်းခွင့်ရသောကြောင့် ကားတန်ဖိုးမှာလည်း ယခုကားဈေးနှုန်းနှင့် အရမ်းကွာသွားပါလိမ့်မည်။ဒါ့ပြင်ဘယ်မောင်းကားဘဲရမှာပါ။ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော Japan ညာမောင်းကားများကို ၀ယ်ယူဖို့ လူကြီးမင်းတို့အား တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
"ကားနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို စုစည်းစာအုပ်ချုပ်ပေးသည်မှာ ကျွန်တော်များ HGI ၏ မှန်ကန်မှု့နှင့်စေတနာသာ ဖြစ်ပါသည်။ "
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) High Grade Image Co, Ltd မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Hino Dutro 2008 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
Featured သက်တမ်းကုန်ရန် 28 ရက်